ID3 Editor -Cleaning iyo abaabulka aad music marna ahaa fudud!
ID3 Editor Nadiifi Qashin aad Music
Album lumay & Cover, labalaabka kuwan raadkaygay ...? Mar dambe tan ma!
The Madax laga yaabaa in aad haddii aad leedahay maktabad music waaweyn:
Just dooro Music Player / Manager aad isticmaasho,
Iyadoo Lugood Lugood No
Users Apple inta badan door bidaan ciyaaro ay music la Lugood. Laakiin Lugood keligay ma maamuli kartaa maktabadda weyn oo u baahan caawimo ka baxsan. Qaar ka mid ah dadka isticmaala dan kama ay dhibaato ku qoran, laakiin qof jecel muusiga si uu asaasiga ah; dhibaatooyinkan run ahaantii ka heli kartaa isaga galay qajaar ah. ID3 Editor la sameeyo ee ku caashaqay music kuwan.
1 Dooro A Caawinaya ID3 Editor
ID3 Editor Best u Lugood
• Falanqeeyo iyo ilaa nadiifiyaa maktabadda music aad la mid click
• Iibsiga aad Music ka Device macruufka
• Download ama record music ka goobood music
• Maaree Music iyada oo aan xayiraado Lugood
• La wadaag Your Lugood playlist la One-click
Top 3 dhibaatooyin tags music la Lugood,
• Ka dib marka 12 Lugood, haddii tafatiri id3 Tags la Lugood, macluumaadka waxaa lagu qoray kaliya ee maktabadda Lugood ah. Taasi waxay keentay in haddii aad doonayay inuu ka ciyaaro aad music la ciyaaryahan kale, ka tags Id3 aan la heli karin.
• Dad badan ayaa wax badan oo music! Sidaas darteed haddii ay bilaabaan tags id3 gacanta sixiddiisa, waa weligiis qaadan lahaa.
• Arrinta kale ee ahayd in haddii user a id3 tags uu gacanta la Lugood itusi, waxaa jiri doona ma daboolayaa kuwan raadkaygay kuwa.
2 nadiifi maktabadda music Lugood
• Hagaaji ururinta la tags la waayay ama ay si toos ah oo aan sax ahayn, sida "artist aan la garaneyn" iyo "Track 01". Waxa kale oo aad tags music gacanta edit karaa.
• Buuxi oo dhan maqan farshaxanka cover album ka mid ah, samaynta maktabadda music aad eegto kaamil ah.
• No more gooyay markii ciyaaro aad music Lugood ay sabab u seegay kuwan raadkaygay Lugood. Hal-riix si meesha looga saaro oo dhan kuwan raadkaygay ku seegay.
• files music labalaabka in Lugood noqon kartaa xanuun dhab ah. Saar songs nuqul Lugood iyo sii maktabadda Lugood aad cusub oo nadiif ah.
Xog dheeraad ah oo ku saabsan TunesGo halkan.
• In la tayeeyo maktabadda Lugood
• Ku dar farshaxanka si Lugood
• Lugood Abaabulaha
• Hagaaji Lugood Library
• Hel Album on Lugood
• Hel oo ka saar nuqul
Dadka isticmaala ciyaaro music ciyaartoyda kale, dhibaatada ugu weyn ay aheyd in badan oo ka mid ah music id3 tags lumo ama la lahaa tus ka badan maktabadda, gaar ahaan dadka isticmaala la maktabadda weyn. Iyaga ayeey hal mar u baahan tahay dadaal badan. Waa hagaag tani waxay ahayd ka hor cusub ID3 Editor ayaa soo baxay.
Top ID3 Tag Editors
Top 3 Online ID3 Editors:
Upload aad files audio arjiga free online in magaca iyo tags ID3 ka xaalkaa
Edit, magaca ama ka saarto warbixin wadajir waa in gundhig qaab ID3 gudaha files audio
Easy in ay isticmaalaan codsiga online freeware u saamaxaya in aad xaalkaa metadata kaydiyaa qaab ID3 ee files audio
Top 3 Free ID3 Editors:
The Editor ID3 Tag waa software ah oo lacag la'aan ah in loo isticmaali karaa ujeedooyinka shaqsi ahaaneed iyo ganacsiga
ID3-TagIT waa software ah oo lacag la'aan ah in loo isticmaalo in magaca iyo edit metadata ee tags ID3 ee MP3 faylasha.
Stamp ID3 Tag Editor gelineya inaad magaca, edit iyo tirtirto metadata ah gundhig gudaha files audio.
Ka qaad , haseyeeshee
Wixii Windows Users
Marka dadka isticmaala Windows badan oo music download in go hal, si ay ugu helaan tus in ay disk adag. Tus ka jira mid ka mid ah waxyaalaha ugu diiqayo u leedahay in aad playlist. Ma qaadan oo kaliya kor u bannaan, laakiin sidoo kale burburisay Raalli ahaanshaha ah dhagaysiga playlist habaysan. Waa hagaag, ayaysan jirin wax dambe u isticmaala Windows, cusub ID3 Editor timaado in aad samatabbixinta!
Saar nuqul Tool for Windows
- Audio Dedupe
• Raadi si degdeg ah oo dhan la mid ah ama dhabta ah nuqul files audio gal ah oo ay subfolders.
• Taageerada CRC32 caadiga ah iyo la barbardhigo magaca file, caching optional oo isku dhafan audio Falanqeynta
• Gurtida, iPod iyo MP4 iPhone, M4A, AAC qaabab audio taageero.
Wixii Users Mac
Users Well Mac ogaado waxa aan ka hadleyno marka ay timaado nuqul raad. Waa maxay runtii inkastoo aad riixo waa inaadan la tirtiri kartaa dhammaan tus ka, kuwaas oo la click hal, ama aad weydo? Waa hagaag ID3 Editor qaadataa daryeelka in aad ku yahay.
Saar nuqul Tool u Mac
• Si fudud riix badhanka Auto Select in ay tirtirto helay tus
• baarista Mac u tus, xataa haddii aad leedahay storages weyn!
• Raadi files isku mid ah iyo xitaa nuqul folder gudaha storages file gudaha iyo dibadda
• Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh files kala duwan, ciyaaro videos iyo pre-maqli files audio
Muti Tag Editor
MP4 ID3 Tag Editor
Magaca ID3 Tags
Saar tag ID3
Nadiifinta Music Library
Beddelaan ID3 Tag
Top 10 Screen taariikhqorihii App u iPhone iyo Android
Top 50 Facebook Video Downloaders shaqeynta Dhammaan Ajandooyinka
Sida aad u gashanayso A Video lagu PowerPoint (AVI, MP4, MOV, wmv iyo iwm)
Video G Facebook: Sida loo sameeyo Video ah Facebook
Sida loo soo biir Dhowr 3GP Video Files galay File ah Single
Sida loo Beddelaan Streaming Audio in MP3
Sida loo Download Videos Break iyo Guba si DVD
> Resource > Video > ID3 Editor - Nadiifi Qashin aad Music